IFTIINKACUSUB.COM: Gacan ku dhiglahii toogtay Wasiir Cabaas oo danbiyo kale lagu helay!
Gacan ku dhiglahii toogtay Wasiir Cabaas oo danbiyo kale lagu helay!
Iftiinkacusub.com: Gacan ku dhiiglahii xabada ku dhuftay Wasiir Cabbaas Cabdilaahi Siraaj , ayaa waxaa lagu hely danbiyo kale oo uu hore u galay.Ninkan oo ahaa caadayste ka awood haysta Hantidhawrka guud ee Somaliya ,ayaa waxa la ogaaday in uu yahay nin dhibta iyo hagar daamada uu ku hayo dadka ay ku kalifayso awooda dheeraadka ah ee uu ka haysto Hanti-dhawrka Somaliya.
Askarigan gacan ku dhiiglaha ah ayaa horaantii bishii Abril waxa ay ciidanka Boolisku ka gudbiyeen warbixin ah, is-hortaag shaqo iyo awood sheegasho aanu lahayn,kadib markii uu gadhiga Hantidhawrka uu marsiiyay dariiq xidhan oo aan gadiidka loo ogolayn.Arintaasi oo sababtay in ay isaga iyo boolisku isku dhacaan,kadibna xoog lagaga qaado qorigii uu sitay.
Muddo yar ka bacdi askarigaasi gacan ku dhiiglaha ah waxaa la dhigay xabsiga,balse waxaa awooda oo leeyahay isaga oo adeeg sanaaya soo daayay hanti-dhawrkii qaranka ee uu ilaaliyaha u ahaa, taasi oo loo arkay in uu yahay Hanti dhawrku nin gar iyo gacan ku siinaaya khaladaadka askarigani samaynaayo.
Waxyaabaha kale ee intii baadhista la waday soo baxay waxaa ka mida,in lasoo ogaaday lana helay ciidamo dheeraada oo uu si gaar ah u leeyahay Hanti dhawrka qaranku Ex Nuur Faarax Jimcaale, kuwaasi oo aan u diiwaan gashanayn Ciidanka Ilaalada ee uu xaqa u leeyahay.